Sidee CBD ugu shaqeyn kartaa Kaabis Nootropics ah? • Dawooyinka Inc.eu
CBD waa xarun ay soo saartay warshadda xashiishadda oo heshay aqoonsi aad u tiro badan sannadihii la soo dhaafay suurtagalnimada dhowr dhibaatooyin caafimaad, iyo sidoo kale fayoobaanta guud.
1 Waa maxay Nootropics?
2 Waa maxay CBD
3 Sidee CBD saameyn ugu yeelan kartaa maskaxda?
4 Faa'iidooyinka Nootropic ee CBD
4.1 Difaaca jirka
5 Walaaca anti
5.1 Cadaadis iyo diiqad
5.4 CBD ma aaminbaa?
Cannabinoid-ka ayaa la ogaaday inuu yareynayo walaaca iyo walbahaarka, hurdo wanaajiyaa oo xitaa hoos u dhigtaa soo noqnoqoshada iyo darnaanta suuxdinta xaaladaha qallalka u adkaysta daaweynta. Dhammaan faa'iidooyinkaas suurtagalka ah waxay kor u qaadayaan su'aasha, CBD Miyuu u shaqeeyaa Nootropic?
Waa maxay Nootropics?
Daraasado badan ayaa hadda la sameeyay si loo qiimeeyo awoodda caafimaad iyo caafimaad ee CBD, iyada oo la helayo cadeymo sii kordhaya oo muujinaya in Cannabinoid laga yaabo inuu leeyahay faa'iidooyin xoog leh oo nootropic ah - la yaab ma leh in badanaa loo codeeyo mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee nootropic.
Nootropics waxaa lagu qeexaa inay yihiin nooc ka mid ah nafaqeeyayaasha iyo daawooyinka maskaxda ka caawin kara mid ka mid ah siyaabahan soo socda:
Ka ilaali sunta iyo cilladaha kiimikada
Kordhi shaqadaada garashada dabiiciga ah
Hagaajinta xusuusta iyo kartida barashada
Waxay ka caawisaa maskaxda inay ku shaqeyso xaaladaha adag
Mashruucan, waxaan ku dhajin doonnaa arrinta ku xeeran saliida CBD sida nootropics, sida ay u shaqeyso, iyo walwalka nabadgelyada ee iman kara
CBD (cannabidiol) waa mid ka mid ah ugu yaraan 100 cannabinoids laga helo xashiishka. Badanaa waxaa laga helaa hemp waxaana loo iibiyaa kaabis ahaan qaabka saliida CBD.
Maaha in lagu khaldo saliida hemp, saliida CBD waxaa laga helaa caleemaha, ubaxyada iyo jirida, halka saliida hemp laga soo saaro miraha geedka hemp. Intaa waxaa dheer, CBD waxay u dulqaadataa saameynta nafsaaniga ah ee THC maahan. Xaqiiqdii, way ka hor tagi kartaa qaar ka mid ah, sida walaaca iyo jahwareerka.
Xarunta waxay kuxirantahay faa iidooyin badan oo caafimaad ee xashiishadda, oo ay kamid yihiin neuroprotection, xanuun yareynta, yareynta walwalka iyo niyadjabka, gargaarka calaamadaha la xiriira kansarka iyo caafimaadka wadnaha, iyo waxyaabo kale oo badan.
Sidee CBD saameyn ugu yeelan kartaa maskaxda?
Nidaamka endocannabinoid waa qeyb ka mid ah maskaxdeena waxaana nidaamiya labo dabiici ah oo cannabinoids ku dhaca jirka; anandamide (AEA) iyo 2-arachidonoyl glyerol (2-AG). Labadan urur waxay ka mid yihiin nidaamka endocannabinoid (ECS) waxayna leeyihiin qaab la mid ah CBD.
Sidee CBD sida nootropics u saameyn kartaa maskaxda? (afb)
Nidaamka ECS waxaa loo yaqaanaa inuu gacan ka geysto nidaaminta:
Rabitaanka cuntada iyo dheefshiidka
Jawaabta xanuunka iyo raaxada
Daaweeyeyaasha Cannabinoid waxay la shaqeeyaan tandem leh habdhiska neerfaha, difaaca jirka, iyo dheef-shiidka si loo xakameeyo shaqooyinkan. CBD waxay sidoo kale saameyn ku yeelan kartaa waxqabadyadan jir ahaaneed iyaga oo ku xiraya soo dhoweeyeyaasha cannabinoid.
Intaa waxaa sii dheer, CBD waxay xakameysaa burburka anandamide, dabiiciyan ku dhaca cannabinoid jirka ku xiran oo ku xiran saameyn saameyn leh. Kordhinta helitaanka anandamide waxay kaa caawin kartaa kahortaga walwalka.
Xaqiiq ahaan, kuwa aqoonta u leh uma maleynayaan inay tani tahay xaddiga buuxa ee awoodda CBD ee jirka, saynisyahannaduna xitaa waxay tuhunsan yihiin in soo-dhoweeyeyaasha kale ee cannabinoid ay u baahan yihiin in la ogaado. Si kastaba ha noqotee, faa'iidooyinkeeda mar hore lama dafiri karo.
Faa'iidooyinka Nootropic ee CBD
Mid ka mid ah saameynta nootropic ee ugu badan ee la iska indhatiray waa awoodda ay u leedahay inay ilaaliso neerfaha. Xeryaha loo tixgeliyo neuroprotective waxay ka hortagi karaan ama hoos u dhigi karaan hoos u dhaca da'da la xiriirta shaqada garashada waxayna sidoo kale gacan ka geysan kartaa la dagaallanka ciladaha neerfaha.
Ma jiro caddayn caafimaad oo badan oo lagu taageerayo faa'iidada neerfaha ee CBD weli, laakiin daraasaadka xayawaanku waxay ku xireen guryaha antioxidant, iyo waxyaabo kale. Waxay kicisaa wax soo saarka BDNF (maskaxda ka soo baxda neurotrophic factor) waxayna ka caawisaa neurogenesis iyo hagaajinta neerfayaasha dhaawacmay.
Isticmaalka ugu badan ee CBD waa inuu yareeyo walwalka. Marka lagu daro kumanaan warbixinno jawaab celin ah oo laga helo dadka isticmaala joogtada ah, waxaa lala xiriiriyay yareynta walwalka iyada oo loo marayo daraasado dhowr ah.
CBD ayaa la muujiyey inay ka caawiso noocyada kala duwan ee walwalka, oo ay ku jiraan kuwa ay sababaan THC iyo welwelka bulshada. Khubarada ayaa isku raacay in saamayntan loo aanayn karo isbeddelka socodka dhiigga aagagga muhiimka ah ee maskaxda, kordhinta howlaha ka socda qaybta bidix ee gyrus ee para-hippocampus iyadoo hoos loo dhigayo howlaha bidix ee amygdale-hippocampus.
Cadaadis iyo diiqad
Cadaadisku wuxuu u horseedi karaa niyad jab iyo taa lidkeed. Saamaynta wanaagsan ee CBD ku leedahay walbahaarka iyo niyadjabka waxaa la rumeeysan yahay inay ka timaaddo isdhexgalka ay la yeelato soo dhoweeyeyaasha serotonin ee maskaxda.
Heerarka serotonin ee hooseeya waxay la xiriiraan niyadda niyadjabsan, gardarrada, walwalka, xanaaqa, dabeecadda degdegga ah iyo isku kalsooni darrada. Dhammaan arrimahan ayaa sidoo kale u horseedi kara culeys iyo diiqad. Caddaymaha hordhaca ah waxay soo jeedinayaan in CBD laga yaabo inay gacan ka geysato yareynta astaamahan iyadoo la kordhinayo heerarka serotonin ee jirkeena.
La'aanta hurdo ku filan ayaa saameyn weyn ku leh waxqabadka garashada maalintii oo dhan. Hurdadu waa qodobka ugu muhiimsan ee wax ku biiriya awoodda maskaxeed ee ugufiican.
CBD waxay kaa caawin kartaa la tacaalidda niyad-jabka, walbahaarka iyo walwalka, kuwaas oo dhammaantood ah sababaha guud ee hurdo la'aanta iyo dhibaatooyinka la xiriira hurdada.
CBD waxay kaloo muujisay ballanqaad la dagaallanka qabatinka maandooriyaha. Cilmi baaristu waxay ku xirtay hoos u dhaca qabatinka maandooriyaha, xashiishadda, tubaakada, nafsadda iyo khamriga.
Khubaradu waxay rumaysan yihiin in CBD ay ka caawiso balwadda iyada oo la beegsanayo xaaladaha halista ee la xiriira soo noqoshada, sida walaaca, walbahaarka iyo niyadjabka. Intaa waxaa dheer, CBD waxaa la rumeysan yahay inay saameyn ku yeelanayso wareegga maskaxda ee mas'uulka ka ah damacsanaanta daroogada.
CBD ma aaminbaa?
Haa. Ama ugu yaraan wax saameyn ah lama soo sheegin illaa iyo hadda, xitaa iyada oo la adeegsanayo muddo dheer oo degdeg ah illaa 1500 mg maalintii.
Intaa waxaa sii dheer, si ka duwan noocyada kale ee nootropics / smart smart, CBD uma muuqato inay carqaladeynayso howlaha maskaxda ee caadiga ah si ay u soo saaraan awoodo maskaxeed oo aan dabiici ahayn, laakiin waxay buuxisaa, ilaalisaa, iskuna daydaa inay soo celiso dheelitirka.
Dhammaan caddayntu waxay muujinayaan in CBD ay leedahay faa'iidooyin nootropic ah oo xoog leh, in kasta oo ay weli jiraan baadhitaanno badan oo socda oo lagu ogaanayo awooddiisa buuxda. Waxay ka dhigeysaa ikhtiyaar badbaado leh, nootropics dabiici ah iyo kudar weyn wax kasta oo nidaam fayoqabka ah.
Ilo ay ka mid yihiin Canex (EN), CBDEncyclopedia (EN), MindlabPro (EN), Slashgear (EN)
CBDsaliid cbdXoogga saarcaafimaad lehcaafimaadkaxagashamaskaxdacilmi baaris
Kobcinta Canopy Corp. dhawaan dhameystiray mid ka mid ah daraasadihii ugu horreeyay ee ugu weynaa ee CBD noloshiisa oo dhan ...